KULAN MUHIIM AH: Barcelona waxay dooneysaa koobka halka Espanyol ay iyana dooneyso hal dhibic si ay…. – Gool FM
KULAN MUHIIM AH: Barcelona waxay dooneysaa koobka halka Espanyol ay iyana dooneyso hal dhibic si ay….
Byare May 8, 2016
(Catalonia) 08 Maajo 2016. Kulan muhiim ah ayaa wax yar kaddib lagu baasan doonaa garoonka Nou Camp oo dhex mari doona kooxaha ku coltama Catalonia ee Barcelona iyo Espanyol.
Kulanku waa mid u muhiim ah labada kooxba oo Barcelona waxay dooneysaa inay qaado horyaalka waa ayna qaadi doontaa haddii ay adkaato caawa isla markaana la celiyo kooxaha daba ordaya ee Atletico Madrid iyo Real Madrid, halka Espanyol ay iyana dhibic u baahan tahay.
Naadiga Espanyol ayaa dhibic u baahan si ay u xaqiijiso inaysan dib ugu laabaneyn horyaalka heerka labaad isla markaana u sii joogto La Liga.
Sikastaba, horyaalka Spain ayaa waxaa ka harsanaan doona hal kulan oo qura marka laga reebo kulanka caawa, Barca ayayna qasab ku tahay inay adkaato caawa si ay horyaalka u difaacato. Sida caadada ahaydna labada koox ee Derby Catalan ayaa waxay macallimiinta labada dhinac isku sawireen maaliyadaha kooxahooda ka hor kulanka dhawaan soo galaya.
TOOS u daawo: Liverpool vs Watford - LIVE (Shaxda sugan)
TOOS u daawo: Manchester City vs Arsenal - LIVE (Shaxda sugan)